သန်လျင်မြို့နယ်၌ လင်မယားနှစ်ဦး စနောက်ရာမှ ခင်ပွန်းအား ဇနီးက ကတ်ကြေးဖြင့် ထိုးသတ်မှုဖြစ်ပွား – Eleven Media Group
သန်လျင်မြို့နယ်၌ လင်မယားနှစ်ဦး စနောက်ရာမှ ခင်ပွန်းအား ဇနီးက ကတ်ကြေးဖြင့် ထိုးသတ်မှုဖြစ်ပွား
Posted on March 30, 2018 April 1, 2018 by Eleven Media Group
သန်လျင်မြို့နယ်၌ လင်မယားနှစ်ဦး စနောက်ရာမှတစ်ဆင့် ခင်ပွန်းအား ဇနီးက ကတ်ကြေးဖြင့် ထိုးသတ်မှု မတ် ၂၉ ရက်က ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း တောင်ပိုင်းခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ စုံစမ်းသိရသည်။
မတ် ၂၉ ရက် မွန်းလွဲ ၁၂ နာရီခန့်တွင် သန်လျင်မြို့နယ်ဆေးရုံသို့ လူတစ်ဦး ထိုးသွင်းဒဏ်ရာများဖြင့် ရောက်ရှိလာကြောင်း သတင်းရသဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ ရဲတာဝန်ရှိသူများ သွားရောက်စစ်ဆေးရာ ထိုးသွင်းဒဏ်ရာရသူမှာ ကွမ်းခြံကုန်းကျေးရွာနေ ကို….(၂၁ နှစ်) ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၎င်းမှာ ထိုးသွင်းဒဏ်ရာများဖြင့် ဆေးရုံသို့ရောက်စဉ် သေဆုံးသွားသဖြင့် သက်ဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့က အခင်းဖြစ်စဉ်အား စစ်ဆေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
သက်ဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့က စစ်ဆေးရာ ကို….(၂၁ နှစ်) မှာ နေအိမ်၌ ဇနီးဖြစ်သူ မ….နှင့် စနောက်ရာမှ စကားများခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းသို့ စကားများ ရန်ဖြစ်ရာမှ ကို…. (၂၁ နှစ်) အား ဇနီးဖြစ်သူ မ….က ကတ်ကြေးဖြင့် ထိုးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ကတ်ကြေးဖြင့် အထိုးခံရသဖြင့် ကို….(၂၁ နှစ်) မှာ ၀ဲဘက်ရင်အုံ ထိုးသွင်းဒဏ်ရာ ရရှိကာ ဆေးရုံ၌ သေဆုံးသွားကြောင်း သိရသည်။
“ခင်ပွန်းနဲ့ ဇနီးတို့ နေအိမ်မှာ စနောက်တာကနေ စကားများရန်ဖြစ်ပြီး ဇနီးက ခင်ပွန်းကို ကတ်ကြေးနဲ့ ထိုးလိုက်တာလို့ ကနဦး စစ်ဆေးချက်အရ သိရတယ်” ဟု တောင်ပိုင်းခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရဲအရာရှိ တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ဖြစ်စဉ်မှ မ…. အား သန်လျင်မြို့မ ရဲစခန်းက (ပ) ၉၁၃/၂၀၁၈၊ ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ ၃၀၂ ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားကြောင်း သိရသည်။
Posted in CrimeTagged လူသတ်မှု
ဟင်္သာ တတက္ကသိုလ်အနီးတွင် လူသတ် အလောင်းဖျောက်မှု နှစ်နှစ်ခွဲနီးပါး ကြာသည်အထိ အမိန့်ချမှတ်နိုင်ခြင်း မရှိသေး
ဟင်္သာတ တက္ကသိုလ်အနီး ချစ်သူလမ်းကြား၌ လူသတ် အလောင်းဖျောက်မှု နှစ်နှစ်ခွဲနီးပါး ကြာသည်အထိ ဟင်္သာတခရိုင် တရားရုံး၌ စစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်ပြီး အမိန့်ချမှတ်နိုင်ခြင်း မရှိသေးကြောင်း သိရသည်။ ယင်းအမှုကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် မတ် ၃၁ ရက်ကတည်းက ရာဇသတ်ကြီး
ပဲခူးမြို့တွင် လူနှစ်ဦးက သံဃာတစ်ပါးထံမှ ငွေကျပ်ရှစ်သောင်း လုယူပြီး သံဃာတော်အား သတ်သွား
ပဲခူးမြို့ ရပ်ကွက်ကြီး (၈) မြေတိုင်း (၂၈/B) ရွှေမြင့်မိုရ်ဦးကျောင်းတွင် မေ ၁၂ ရက် ည ၁၁ နာရီခန့်က သံဃာတော်တစ်ပါးထံက ငွေကျပ်ရှစ်သောင်းခန့်ကို လူနှစ်ဦးကလု၍ သံဃာတော်အားသတ်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ ပဲခူးမြို့
ကော့မှူးမြို့နယ်တွင် စတိုးဆိုင်မှ အလုပ်သမားနှစ်ဦး ငါးပိ ၀ယ်မလာသည့်ကိစ္စဖြင့် စကားများရန်ဖြစ်ရာမှ လူသတ်မှုဖြစ်ပွား
ကော့မှူးမြို့နယ်တွင် စတိုးဆိုင်မှ အလုပ်သမားနှစ်ဦး ငါးပိဝယ်မလာသည့်ကိစ္စ ဖြင့် စကားများရန်ဖြစ်ရာမှ လူသတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း စက်တင်ဘာ ၂၂ ရက်တွင် တောင် ပိုင်းခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။ စက်တင်ဘာ ၂၁ ရက် နံနက် ၈ နာရီခန့် တွင်
မုံရွာမြို့တွင် အရက်သေစာ သောက်စားမူးယစ်ပြီး တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအချင်းချင်း စကားများရန်ဖြစ်ရာမှ လူသတ်မှုဖြစ်ပွား
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး မုံရွာခရိုင် မုံရွာမြို့ မြ၀တီရပ်ကွက်တွင် ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက်ညက အရက်သေစာ သောက်စားမူးယစ်ပြီး တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအချင်းချင်း စကားများရန်ဖြစ်ရာမှ လူသတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း မုံရွာနယ်မြေရဲစခန်း၏ မှတ်တမ်းများအရ သိရသည်။ မြ၀တီရပ်ကွက် သစ္စာလမ်းသွယ် (၁၆) ရှိ မေတ္တာဘော်ဒါဆောင်၌
တာမွေဈေးရှေ့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် လူသတ်မှုမှ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများကို ဖမ်းဆီးရမိ
တာမွေမြို့နယ်၊ တာမွေဈေးရှေ့တွင် စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့ ည ၁၀ နာရီ ၁၅ မိနစ်ခန့်က အုပ်စုနှစ်စု ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားရာမှ ဓားခုတ်ခံရမှုကြောင့် တစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ရသည့် ဖြစ်စဉ်မှ လူသတ်မှု ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများ ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီး ရမိပြီဖြစ်ကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့
FIFA ”The Best”…